Ogaden News Agency (ONA) – Jaliyadda Sweden oo shir wada tashi iyo sagootin ah isugu yimid
Jaliyadda Sweden oo shir wada tashi iyo sagootin ah isugu yimid
Posted by ONA Admin	/ October 17, 2013
Waxaa maanta oo ay taariikhdu ahayd 2013/10-16 Kulan dag dag ah oo uu hogaaminayo Gudoomiyaha Jaaliyada Sweden isugu yimid Jaaliyada iyo ururka dhalinta OYSU Sweden.
kulankaa oo ahaa mid xasaasiya ayaa waxaa looga arinsaday hawlo badan oo quseeya halganka xaqa ah ee ay JWXO hormudka u tahay. Sidoo kale waxaa looga arinsaday sida looga hortagi lahaa falalka iyo shirqoolada ay gumaysiga iyo gumaysi kalkaalkiisa maleegayaan.
Gumaysiga iyo gacan yarayaashiisa naf lacaariga ah, ayaa waayahanba isku dayaya fal walba ooy u arkaan in ay ku qaldi karaan shacabka dulman ee S/Ogadenia in ay ku dhiiradasm, ayagoo usoo maraya wadooyin kala duwan. Arimahaa ayay jaaliyadda si fiican isula falanqaysay waxayna go’aan ku gaadheen in kooxda Hawaarinta ah ee Cali dhaanto uu ka midka yahay ee la soo diray talaabo sharci ah laga qaado, hadday cagta soo dhigaan dalka Sweden, isla marahaantaana shacabka looga digo. Cali Dhaanto iyo kooxda la socota waxay hormuud ka yahiin xasuuqa shacabka S/Ogadenia, iyagoo fanka u isticmaala hurinta dagaalada shacabka lagu hayo oo ku dhiirigaliya maxaysatada Hawaarinta ee loo yaqaano Liyuu Polis. Waxay jaaliyadu ka tashatay talaabooyin sharciyeed laga qaadi lahaa hadday cagta soo dhigaan sida warar hoose lagu helay dalka Sweden iyadoo safaaradda gumaysiga uu arintaa ka shaqaynayo.
Shirka ay jaaliyadda isugu timid ayaa ahmiyada badan xambarsanaa ay ka mid ahayd in lagu sagootiyo xubin qaaliya oo ka tirsan OYSU Sweden iyo Jaaliyada. Halgame Mahamed Amiin Ali Haidar oo u dhoofaya 17ka bishan dalka Maraykanka ayay xubnaha jaaliyadda ku sagootiyeen kulana dardaarmeen meel walba oo uu tago in uu sii laba jibaaro hawlahiisa halgameed. Gaar ahaan waxaa erayo guubaabo, iyo waano isugu jira usoo jeediyay Xildhibaan Riyaale Xaamud iyo Gudomiyaha Jaaliyada Mudane Haybe.
Ka tashada cadaawahoo is ku tiirsanaadaay.
Dabaqoodhi wasakhle waa damiir laawe baadi ah oo an is ogayn.